02 | January | 2008 | Save Burma
၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထူးခြားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် အရှင် ဂမ္ဘီရကို ရွေးချယ်
သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကြီး အမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သော စက်တင်္ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့။ မြို့တော်ခန်းမ ရှေ့တွင် သိန်းနှင့်ချီသော ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူများ ချီတက်လာပုံ။ (Photo: RFA) ပုံကြီးကြည့်လိုလျှင်။ >>
Person of the year 2007 ခေါ် ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထူးခြားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ပြီးခဲ့တဲ့ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော် အရှင် ဂမ္ဘီရကို မြန်မာ အင်တာနက် ဝက်ဆိုက် တခုဖြစ်တဲ့ The Burma Digest က မဲပေးစနစ်နဲ့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ အင်တာနက် စာမျက်နှာလောကမှာ လူသိများ ထင်ရှားတဲ့ The burma Digest ဝက်ဆိုက်ဟာ နှစ်စဉ်လိုလို တနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရေးလောကမှာ ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အင်တာနက်ပရိသတ်ရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့ ရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက် အထူးခြားဆုံးပုဂ္ဂိုလ် Person of the year 2007 အတွက် ပရိတ်သတ်ပေးတဲ့ မဲနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့ရာမှာ အရှင်ဂမ္ဘီရ ရွေးချယ်ခံရကြောင်း ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ မဲအများစုကို အီးမေးကတဆင့် ပေးပို့ကြတယ်လို့ ကြေညာချက်မှာဖေါ်ပြပါတယ်။
ဦးဂမ္ဘီရဟာ သက်တော် ၂၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓစာပေ လေ့လာသင်ယူနေသူ စာသင်သား ရဟန်းတပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ပခုက္ကူမြို့မှာ ဆန္ဒပြသံဃာတွေကို စစ်အစိုးရက ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာက ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးလို့ ကမ္ဘာတဝှမ်းကျော်ကြားခဲ့တဲ့ သံဃာ့ဆန္ဒ ထုတ်ဖေါ်ပွဲကြီးထဲမှာ ပါဝင်ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုရဲ့ ခေါင်းဆောင်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၂၆၊ ၂၇ ရက်နေ့ စစ်တပ်က သံဃာ့ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ချေမှုန်းတဲ့အခါ လွတ်ကင်းရာကို တိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။ တိမ်းရှောင်နေစဉ်အတွင်း မိသားစုဝင်တွေကို စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ အရှင်ဂမ္ဘီရကို စစ်အစိုးရဖမ်းမိသွားခဲ့ပြီး အင်းစိန်ထောင်မှာ အကျဉ်းချထားပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သစ္စာဖေါက်မှုနဲ့ အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်တသက် ကျမှတ်ခံရဘွယ်ရှိတယ်လို့လည်း ထင်မြင်ယူဆနေကြပါတယ်။
Burma Digest URL: http://burmadigest.info/
Tagged with Burma Digest, U Gambira
World Focus on Burma (2-1-08)
Mya Mya,aretired government officer, was only 11 when Burma becameacountry that was seen as far more developed than most of its neighbours. …
The fee is now far beyond the means of virtually all of the 56 million people in the former Burma. Without satellite, the only television news broadcasts in …
Register – Voice of America
YANGON (AFP) — Myanmar’s military regime has promised to hold fuel prices at current levels, state media reported Tuesday, amid rumours ofahike similar to …
Myanmar foreign minister to meet PM
It was based onaspeech of the US first lady Laura Bush Dec 10, in which she said, ‘India, one of Burma’s closest trading partners, has stopped selling …
Thai hospitality to get interesting: THA
… such as Dusit’s growth now in three international locations, Dubai (United Arab Emirates), Yangon (Burma/Myanmar), and Manila (Philippines). …
Chicago Elementary Schools Report Rise In Number Of Students From …
Most of them are from Burundi and Myanmar, formerly known as Burma. According to the Illinois Department of Human Services, between July and September 1200 …
Man’s journey of faith leads to book
Chicago Daily Herald, IL –9hours ago
Weinstein said the refugees now coming from Myanmar (formerly Burma) and African countries have an even bigger adjustment than his family did when they fled …
…anameless NGO asked why there wasareport being given on Myanmar when the UN human rights council agenda clearly said that Burma was to be discussed. …
To hold on or let go –aNew Year’s challenge
Burma/Myanmar has long avoided both outside influences and internal change. When I exercised my seven-day visa, the only kind allowed, in 1971 I counted …
Cultural Cavemen & The Wimps of the West
… of these thugs who claim Allah was an American missionary couple and most notably of late included the slaughter of Buddhist monks at Myanmar in Burma. …
But like Beijing, New Delhi has baulked at takingatougher line against the former Burma and opposed sanctions. India says its concerns asaneighbour are …
openPR (press release), Germany –
… declared war against Myanmar, and then ‘invaded’ its Internet when it started the ISO compatible .BU (Burma) TLD for the first time in history. …
Son Replaces Father in the Salesian Congregation
… of Burma in 1960s, to day his son Bosco has replaced him in the congregation,“ said Leo`s younger brother, the Salesian provincial of Myanmar Fr. …
Tagged with Burma, Fuel Price, Hike, Independence, India, Myanmar, Reforem, Refugee, Saatellite TV
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာတပ်ပေါင်းစုကြီးမှ နှိုးဆော်ချက် (၁-၁-၀၈)